सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सम्पन्न , के भयो निर्णय ? — Imandarmedia.com
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सम्पन्न , के भयो निर्णय ?
काठमाडौ। सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक सकिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीमा साझा धारणा निर्माण गर्न बसेको बैठक एजेण्डामै प्रबेश नगरी सकिएको छ। सत्ता गठबन्धनका सदस्य जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित भएपछि बैठक शुक्रबार बिहान ९ बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
बैठकमा भाग लिन आएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि बीचमै उठेर हिँडेपछि सत्ता गठबन्धनले एमसीसीसहितका विषयमा निर्णय लिन नसकेको हो। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बालकोबाट फिर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका नेता सहभागी बैठक बसेको हो।
बैठकमा सहभागी जनमोर्चा नेपालकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एमसीसीबारे कुनै छलफल नभएको बताइन्। ‘बालुवाटारमा हामी बसेका थियौँ। त्यहाँ एसमीसीबारे कुनै कुरा भएन’ उनले भनिन्, ‘भोलि फेरि बसौँ भन्ने भयो, अनौपचारिक कुराकानीपछि हामी उठ्यौँ।’स्रोतका अनुसार यो बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादव नआएपछि तथा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल ढिला पुगेर पहिले निस्केपछि कुनै एजेण्डामा छलफल हुन नसकेको हो।
अमेरिकाले एमसीसी पास गर्नै पर्ने दबाब बढाइरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन अझै साझा धारणा बनाउन असफल भएको छ। बिहीबार बिहान उपेन्द्र यादवको हात्तीवनस्थित निवासमा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको बैठक बसेको थियो।कांग्रेस सहभागी नभइ बसेको उक्त बैठकलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। त्यो बैठकले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको संकेत पनि गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ।
पछिल्लो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पासका लागि सदनमा टेबुल तयारी गरेसँगै सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। यसअघि सरकारले सोधेका प्रश्नको अमेरिकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नपठाएको भन्दै माओवादी एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा देखिएको छ।
अमेरिकाले जवाफ अध्ययन गर्दा एमसीसी संशोधन नहुने अडानका कारण नेपालको संसदमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना नरहेको माओवादीका सचेतक देव गुरुङले बताए। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै गुरुङले सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमोटोल दिएकोले अघि बढाउने ुच्याप्टर क्लोजु भएको पनि घोषणा गरे।
‘सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमोटोल दिइएको छ, त्यसलाई संशोधन गर्न पनि नसकिने भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘अब त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो।
‘एमसीसीबारे हामीले हतारिएर पोजिसन बनाउँदैनौं। पहिले सरकारमा रहेकाहरुले पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ’, भेटका क्रममा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले भने, ‘हिजो हामी सरकार हुँदा एमसीसी पास गर्न प्रयास गरेको कुरा तपाईंहरुलाई थाहै छ। अहिले एमसीसी जसका कारण रोकिएको हो, पहिले उनीहरुले पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ।
चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि अमेरिकन सहयोग मिलिनियम चाइलेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आएसँगै प्रचण्डका भागडौड सुरु भएको छ । एमसीसी पा िगर्ने नगर्ने भनेर सल्लाह गर्न उनको डौडधुप सुरु भएको हो ।
उपाध्यक्ष फातिमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटिसकेकी छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेट्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई शुक्रबार फातिमाले भेट्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस सहयोगी गोविन्द परियारले जानकारी दिए । यसअघि बिहीबार दिउँसो २ बजे बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्ने फातिमाको काठमाडौं आगमनले राजनीति दलरू दबाबमा परेका छन् । फातिमासँग भेट्नु अघि बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दैछ ।
यस्तो बेला एमसीसीले नै सत्य तथ्य बाहिर ल्याएपछि तनावमा परेका प्रचण्ड माधव उपेन्द्र एमसीसीका प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदा थप दबाबमा परेका छन् । त्यसअघि तिनै जना सल्लाहमा जुटेका हुन् । यादवको निवास हात्तिवनमा भएको छलफलमा एमसीसी प्रतिनिधिमण्डलसँग एकै स्वरमा कुरा राख्ने समझदारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।